Prof. Jawaari oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay qaar ka mid ah musharixiinta madaxweyne (SAWIRO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Jawaari oo kulan aan caadi ahayn la yeeshay qaar ka mid ah musharixiinta madaxweyne (SAWIRO)
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta kulan aan caadi ahayn la yeeshay musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorasheeda lagu wado inay dhacdo bilawga bisha Febraayo ee sanadkaan.
Musharixiinta kala ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, C/raxmaan Maxamed Faroole, Canab Maxamed Daahir iyo Maxamed Axmed Jabarti ayaa Prof. Jawaari kala hadlay sida ay u dhaceeyso doorashadda madaxweynaha dalka iyo hubinta in doorashadu u dhacdo xilliga lagu ballamay.
Dhinaca kale, Prof. Jawaari ayaa dhamaan musharaxiinta uu maanta kulanka la yeeshay guddoonsiiyey buugag ay ku qoran yihiin taxanaha doorashadda golayaasha sharci dajinta dalka laga soo bilaabo sanadkii 1959-kii iyo habraaca doorashadda madaxweynaha iyo xeer hoosaadka u gaar ah.
Prof. Jawaari oo wareysi siiyay warbaahinta ayaa sheegay in barlamaanka federaalka Soomaaliya uu diyaar u yahay in dhamaan musharixiinta madaxweyne ay si caddaalad ku jirto ula dhaqmayaan islamarkaana ay doorashadu ku dhici doonto si cadaalad ku jirto, kana maran nin jecleeysi.
Ugu dambeyntii, Prof. Jawaari ayaa tilmaamay in marka ay soo dhamaano doorashadda guddoonka Aqalka sare la sameyn doono guddi baarlamaani ah, kaas oo soo saari doono jadwal ku saabsan xilliga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Soomaaliya.